Nin cunsuri ah oo hooyo Somali ah jiirsiiyay gaari oo maxkamad ku socoto Ingiriiska - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Nin cunsuri ah oo hooyo Somali ah jiirsiiyay gaari oo maxkamad ku socoto Ingiriiska
Nin cunsuri ah oo hooyo Somali ah jiirsiiyay gaari ayaa maxkamad ku socotaa dalkaasi Ingiriiska gaar ahaan magaalada Lesta (Leicester) oo ay degan yihin Somali badan oo ka timi Yurubta kale.
Ninkan Ingiriiska ah ayaa saaxiibadii u sheegay inuu ka caroodey fal argagixiso oo ka dhacay London. Qareenka hooyada Somaliga ah ee la yiraa Saynab Xuseen ayaa sheegay in haweenayda uu ku weeraray dharka ay xiran tahay iyo xijaabkeeda oo kaliya.
Weerarkan ninkan cunsuriga ah ayaa dhacay sanadkii hore bishii Sibtambar. Saynab Xuseen ayaa maxkamada u sheegtay in markii ninkan gaariga jiirsiiyay ay gidaar ku dhacdey isla markaana dhiig ka yimi wejigeeda.
”Waxaan u wacdey caawimo laakiin ma jirin cid ii dhow, waxaan isku dayay inaan kaco waanse waayay awood aan ku kaco, wax dareen ahna waan ka waayay gacanteyda midig waxaanan u maleeyay inay jabtey ayay tiri Saynab Xuseen.
”Waxaan isku dayay inaan gacanteyda bidix moobilkeyga ku gaaro, sidoo kale dareen male ayay raacisey Saynab. Waxa Saynab loo qaadey isbitaal halkaas oo la ogaadey in xubno badan oo jirkeeda ah burbur ka soo gaaray oo ayna sariirta ka kacayn.
Ninkan ayaa sii watey waalidiisa iyo nacaybkiisa markana gaarigiisa ku qaadey gabadh 12 jir ah oo Somali ah. Dacwada ninkan ayaa socota.
Xilliyada ay dhacaan weerarada ay gaystaan argagixisada waxa kordha carada ay qaadaan dad iyagu markii horeba bukey oo Muslimka necbaa oo ka faaiideysta.